Sineziqalo zokuqala, iinkampani ezimiselweyo, kunye ne-analytics kunye neenkampani ezinobunkunkqele eziza kuthi zifuna uncedo lokukhulisa ishishini labo kwi-Intanethi. Nokuba ubungakanani okanye bunqabile, xa sibuza malunga nabo indleko-nganye kwaye i Ixabiso lobomi (I-LTV) yomthengi, sihlala sidibana nokungaboni. Iinkampani ezininzi kakhulu zibala uhlahlo-lwabiwo mali ngokulula:
Ngale ndlela, intengiso yomoya inyukela kwikholamu yeendleko. Kodwa ukuthengisa akuyona inkcitho efana nerenti yakho… lutyalomali ekufanele ukuba lusebenzela ukukhulisa ishishini lakho. Ungahendeka ukubala ukuba indleko yokufumana umthengi omtsha sisixa esithile sedola, kwaye ke inzuzo yinzuzo oyifumeneyo kuthengo lwabo. Ingxaki yile yokuba abathengi ngokwesiqhelo abayenzi into yokuthenga. Ukufumana umthengi yeyona nto inzima, kodwa umthengi owonwabileyo akathengi nje kube kanye kwaye ashiye- bathenga ngakumbi kwaye bahlala ixesha elide.
Nje ukuba uliqonde ixabiso lobomi bomthengi wakho, linganisa ireyithi yakho yokuhla, uhlalutye iindleko zokufumana umthengi, uya kuluqonda utyalo-mali olwenzayo kunye nembuyekezo ephakathi kolo tyalo-mali.